Ø Masuuliyiinta Unugga JWXO ee Danmark oo socod hawleed ku maray gobollada Dalka Denmark.
Ø Itoobiya oo lagu canbaareeyay sharciga cusub ee saxaafada.
Ø Itoobya oo rabta inay qabiilka Anyuwak tirtirto.
Ø Ururka midawga Africa oo laga codsaday inuu xoogga saaro xasuuqii Gambeella.
Ø Barnaamujkii aragtida halgamaaga iyo suugaan halgameed.
Masuuliyiinta Unugga JWXO ee Danmark oo socod hawleed ku maray gobollada Dalka Denmark.
Wafti ballaadha oo ka tirsan Unugga Jabhadda Waddaniga Xoraynta Ogadenya (JWXO) ee dalka Danmark ayaa socod hawleed ku soo maray gobollada kala duwan ee dalka Danmark, waxayna socdaalkoodaas ka gaadheen natiijooyin aad u fiican oo gacan wayn ka gaysan kara horumarinta dareenka waddaninimo ee dadwaynaha iyo waxqabadkooda ku aaddan halganka lagu xoraynayo dalka Ogadenya, sidaas waxaa noo sheegay guddoomiyaha Unugga JWXO ee Danmark Mr: C/llaahi Colaad.
Waftigii ka qayb qaatay socdaalkan, oo la billaabay 08 April, lana soo gabagabeeyay 12 April, waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha Hooggaanka Warfaafinta JWXO, guddoomiyaha Unugga JWXO ee Danmark iyo xubno kale oo ka tirsan guddiga fulinta ee Unugga Denmark.
Ujeeddada socdaalkani waxay ahayd sidii dadwaynaha Ogadenya ee ku dhaqan dalkan Danmark loola socodsiin lahaa xaaladda guud ee Ogadenya meesha ay marayso iyo qaabka uu u socdo halganka lagaga soo horjeedo cadowga gumaysiga Itoobiya ee ay JWXO horkacayso. Waxaa kaloo loogu talagalay in dadwaynaha lagu dhiirri geliyo inay si hab-sami ah uga qayb qaataan halganka, isla markaana ay dadaalkooda sii kordhiyaan, si loo soo dedejiyo himilada laga sugayo halganka madaxbannaanida Ogadenya loogu jiro.
Dadwaynaha Ogadenya ee gobolladaas kala duwan ku dhaqan ayaa waftigaas farxad iyo rayn-rayn ku soo dhaweeyay, iyagoo u muujiyay sida ay ugu jeellan yihiin warbixinaha halganka ku saabsan, isla markaana ay heeganka ugu yihiin inay xoojiyaan Jabhadda xaq u dirirka ah ee JWXO iyo halganka ay madaxbannaanida Ogadenya ku baadi-goobayso.
Xubnaha waftigaas ayaa wariyaha Wakaaladda Wararka Ogadenya (ONA) u muujiyay sida ay ugu qanacsan yihiin natiijooyinka ay socod hawleedkoodan ka soo hoyiyeen. Waftigu wuxuu xaruuntiisii dib ugu soo laabtay maalintii Isniinta ahayd ee taariikhdu ku beegnayd 12 April.
Masuuliyiintaasi waxay wariyaha u sheegeen inay si wanaagsan u dhagaysteen talooyinka iyo tusaalooyinka kala duwan ee dadwaynuhu u soo jeediyeen, isla markaana ay ka wada-tashadeen sidii halganka loo horumarin lahaa, hagardaamoooyinka cadowgana looga hortegi lahaa.
Arimah sida gaarka ah u soo jiitay dareenka waftiga waxaa ka mid ahaa hadiyad qaali ah oo waftiga ay guddoonsiisay gabadh Ogadenya u dhalatay, gabadhaas wadaniyada ah oo waftiga u hibaysay ciid guduudan oo laga soo qaaday mid ka mid ah magaalooyinka Ogadenya.
Gabadhaasi waxay waftiga u sheegtay in ciiddaasi ay tusaale u tahay dareenka waddaninimo iyo jacaylka ay u hayso dhulkeeda Hooyo, kaasoo ay doonayso inay la qaybsato masuuliyiinta iyo xubnaha Unugga Ogadenya ee Denmark.
Itoobiya oo lagu canbaareeyay sharciga cusub ee saxaafada.
Wariyaha wakaaladda wararka u jooga magaalada Addis Ababa ayaa sheegaya in Itoobiya lagu canbaareeyay sharciga cusub ee ay ku soo rogtay saxaafada. Sharciga cusub ayaa waxaa uu xukuumada Addis Ababa u fasaxayaa inay xidho wariyaha wax khalad ah ka qora dawlada Itoobiya iyo inay dawladu la wareegto wargaysyada wadanka dibadiisa laga leeyahay.
Waxa kale oo dawlada Itobiya lagu canbaareeyay in ay maamnuucday ururkii wariyayaasha Itoobiya ee madaxa banaanaa, ka dibna ay samaysay mid iyada taageera, taasoo ka soo hor jeeda sharciga caalamiga ah.
Waxaa kale oo warku intaa raaciyay in ururka wariyayaasha Itoobiya ee madaxa baanan uu wariyayaasha ka codsaday inay u dagaallamaan ilaalinta xuquuqda wariyayasha oo ayna iyagu qaarkood dawlada raacin.
Itoobya oo rabta inay qabiilka Anyuwak tirtiro.
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Addis Ababa ayaa sheegaya inay dawlada Itoobiya rabto inay tirtirto qabiilka Anyuwaka ah, sidaasna waxaa caddeeyay ururka caalamiga ah ee jidhdilka ka soo hor jeeda (WOAT), oo caddeeyay inuu ilo muhiim ah oo lagu kalsoon yahay ka helay warbixintan.
Waxa kale oo warku intaa raaciyay inay si ula-kac ah ciidamada Itoobiya xasuuqaas binaadanimada ka baxsan ugu gaysteen dadka aan waxba galabsanin ee qabiilka Anyuwak oo ay tiradoodu dhan tahay ilaa 100,000 oo qof.
Warbixin dheer oo ururkaasi uu soo saaray ayuu ku caddeeyay in laga billaabo bishii December ee sanadkii 2003dii ay ciidamada Itoobiya kula kaceen dil, kufsi, jidhdil, xidhay aan sharci ahayn,dadka oo la waayo iyo weliba guryaha iyo beeraha oo la gubo, arimahaas oo keenay inay xasilooni darro ka dhacdo gobolka Gambella.
Ururka midawga Africa oo laga codsaday inuu xoogga saaro xasuuqii Gambeella.
Wararka naga soo gaadhaya magaalda Addis Ababa ayaa sheegay in laga codsaday Midawga Afrika inuu xooga saaro sidii loo baadhi lahaa xasuuqii loo gaystay qabiilka Anyuwak.
Waxaa codsigan soo jeediyay wakiilka ururka cadaalada ee Afrika Mr. Alex Dwell, wuxuuna sidaas ku sheegay mar laga hadlayay xasuuqii ka dhacay wadanka Rwanda oo hadda laga joogo mudo 10 Sano ah.
Waxa uu Mr. Alex intaa raaciyay inaan xasuuqii ka dhacay gobolka Gambella sidii loo baahnaa wax looga qabanin. Waxa kale oo uu Mr. Alex yidhi ”waa in gudi madaxbanan oo soo baadha xaqiiqada dhabta ah loo saaraa, ka dibna cidii ay ku cadaato maxakamad la horkeeno, si nabadgelyo ahna lagu xalliyo khilaafaadka halkaas ka jira”.
Faafin: SomaliTalk.com | April 16, 2004